Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. विद्युत् आपूर्ति नहुँदा नेपाली कागज उद्योग बन्द – Janata Live
काठमाडौं । नियमित विद्युत् आपूर्ती हुन्थ्यो भने यतिवेला पाण्डवखानीमा धमाधम नेपाली हाते कागज उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो । तर, गलकोट नगरपालिका–१० पाण्डवखानीमा रहेको घुम्टे हाते कागज उद्योग पछिल्लो ७ महिनादेखि बन्द छ । केन्द्रीय विद्युत्को पहुँच नपुगेको पाण्डवखानीमा स्थानीय लघु जलविद्युत्को उत्पादन विस्तारै घट्दै गएपछि गत वर्षको माघदेखि यता उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।
काठमाडौं । आज पनि सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । आज छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार...
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीकोको स्थिर रहेको छ । आज छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार...
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति ?
काठमाडौँ, २७ असोज । मंगलबार सुन चाँदीको भाउमा गिरावट आएको छ । सोमबार तोलाको ९५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार...
राष्ट्र बैंकले यसपटक दशैंमा नयाँ नोट नसाट्ने
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले यसबर्ष दशैंका लागि नयाँ नोट सटही गर्ने भएको छ।कोरोना भाइरस महामारीका कारण उक्त सेवा सुचारु नहुने...
काठमाडौं । नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको छ । शुक्रबार ९४ हजार ८००...
काठमाडौं । कोरोना महामारीले राजस्व आम्दानी घटाएको बेला पर्वको महिना असोजमा ठुलो खर्च भए पछि सरकारको नगद रित्तिएको छ। राजस्वसहितको...
काठमाडौं – जनकपुर–जयनगर रुटमा भारतबाट केही समयअगाडि ल्याइएको रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । निकै तामझामका साथ रेल भित्र्याइएको भए...
काठमाडौं, २३ असोज । शुक्रबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आज तोलाको...